‘ Manchester Is Red ‘ ဆိုတာကို သကျသပွေခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ
March 8, 2021 author one Articles 0
မနကေ့ ပရီးမီးယားလိဂျပှဲကွီးပှဲကောငျးအဖွဈ ကစားခဲ့တဲ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးက မနျစီးတီးအသငျးကို (၂)ဂိုးပွတျအနိုငျယူပွီး “မနျခကျြစတာမွို့ဟာ အနီရောငျတှေ လှမျးမိုးထားဆဲ”ဆိုတာ သကျသပွေခဲ့ပါတယျ။
ဒီပှဲမတိုငျခငျ မနျစီးတီးအသငျးက ပွိုငျပှဲစုံ(၂၁)ပှဲဆကျအနိုငျ၊ ပရီးမီးယားလိဂျ(၁၅)ပှဲဆကျအနိုငျ၊ နောကျဆုံး(၂၈)ပှဲဆကျရှုံးပှဲမရှိတာကွောငျ့ မနျခကျြစတာဒါဘီပှဲမှာ ရလဒျကောငျးတဈခုရယူနိုငျမယျလို့ ထငျကွေးပေးခံခဲ့ရပမေယျ့ သရတေောငျမရခဲ့ဘဲ အိမျကှငျးမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးကို လကျဆောငျ(၃)မှတျပေးခဲ့ရတယျ။
ဒီပှဲနဲ့ပတျသကျပွီး နှဈဖကျအသငျးရဲ့ ခွစှေမျးပိုငျးကို သုံးသပျကွညျ့ရငျ နှဈသငျးစလုံး အကောငျးကွီးမဟုတျခဲ့ပမေယျ့ ယုံကွညျခကျြအပွညျ့နဲ့ ကစားနိုငျတဲ့ ယူနိုကျတကျအသငျးက အသာရသှားတယျလို့ပွောရမယျ။ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ အောကျအသငျးအဖွဈ သတျမှတျခံရရငျ အမွဲတမျး မထငျမှတျတာတှလေုပျပွလရှေိ့ပွီး ကိုယျကအပျေါအသငျးဖွဈနရေငျတော့ မကွာခဏဆိုသလို အမှတျတှေ ဆုံးရှုံးလရှေိ့တဲ့ပွဿနာကို အမွနျဆုံးပွငျဆငျသငျ့နပေါပွီ။
ဒီပှဲမှာတော့ ယူနိုကျတကျနညျးပွ ဆိုးလျရှား ခငျးကငျြးခဲ့တဲ့နညျးဗြူဟာကိုတော့ ခြီးကြူးရမှာပါ။ ဆိုးလျရှားက တဈဦးခငျြး Skill ကောငျးတဲ့ မနျစီးတီးတိုကျစဈကစားသမားတှကေို One By One Marking လုပျတာထကျ သူတို့အခငျြးခငျြး ခြိတျဆကျလို့မရအောငျ ဘောလုံးလမျးကွောငျးတှကေို ဖွတျတောကျကစားဖို့ သူ့ကစားသမားတှကေို ညှနျကွားထားပုံပါပဲ။
အဲဒါကွောငျ့ ယူနိုကျတကျကှငျးဘကျခွမျးမှာ မနျစီးတီးကစားသမားတှေ ဘောလုံးပေးပို့မှုလုပျတဲ့အကွိမျအမြားစုက ဂိုးရှရေ့ောကျတာနညျးပွီး ယူနိုကျတကျကစားသမားတှေ မကွာခဏဖွတျယူသှားနိုငျတာကိုလညျး တှရေ့မှာပါ။
မနျစီးတီးနဲ့တှတေို့ငျး စတာလငျကို အိတျကပျထဲထညျ့ထားနိုငျခဲ့တဲ့ ဘဈဆာကာဟာ အခုပှဲမှာလညျး ထုံးစံအတိုငျး စတာလငျကို အကောငျးဆုံးထိနျးခြုပျနိုငျခဲ့ပွီး တှမျမီနေး၊ ဖရကျဒျတို့ရဲ့ ကစားအားကွောငျ့ မနျစီးတီးတိုကျစဈကစားပုံက အရငျလောကျမထကျမွကျခဲ့ဘူး။
ပွိုငျဘကျခံစဈမှာ လှတျနတေဲ့ Channel တှကေနေ Attacking လုပျပွီး ဂိုးတှသှေငျးနတေဲ့ ဂှမျဒိုဂနျလညျး ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ Tight Defensive Play ကွောငျ့ ခွခြေုပျမိသလိုဖွဈသှားတော့တယျ။ ဒီကွားထဲ တိုကျစဈအတှကျ အဓိကအသကျသှေးကွောလို့ပွောရမယျ့ ဒီဘရိုငျးနားက လူပေးမှားတာတှဖွေဈခဲ့သလို၊ ပုံမှနျစှမျးဆောငျရညျမရှိတဲ့အခါ မနျစီးတီးတိုကျစဈ Frame တဈခုလုံး အလှဲလှဲအခြျောခြျောဖွဈသှားတော့တာပါပဲ။
ယူနိုကျတကျအတှကျ ကံကောငျးခဲ့တာတဈခုကလညျး ပှဲစလို့ စက်ကနျ့ပိုငျးအကွာမှာ ပယျနယျတီကနေ ဂိုးရခဲ့တာဖွဈပွီး အဲဒီဦးဆောငျဂိုးကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျး ခံစဈကို အသအေခြာပွငျဆငျခှငျ့ရခဲ့သလို မနျစီးတီးအသငျးအတှကျလညျး ခပြေဂိုးရမယျဖွဈမယျဆိုတဲ့ ဖိအားပါ ဝငျသှားခဲ့တယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ တဈပှဲလုံးခွစှေမျးကို ကွညျ့ရငျ ခံစဈမှာ နညျးဗြူဟာမွောကျကစားနိုငျခဲ့သလို သူတို့အားသနျတဲ့ Counter Attacking ကို ကောငျးကောငျးအသုံးခနြိုငျခဲ့လို့ အခုလိုနိုငျပှဲရခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲမှာ ဂှါဒီယိုလာရဲ့ လူထုတျပုံက ပုံမှနျအတိုငျးဆိုပမေယျ့ ဝဖေနျခငျြစရာတော့ရှိခဲ့တယျ။ ဥပမာ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ အားအကောငျးဆုံး ဘယျခွမျးတိုကျစဈပိုငျးကို ထိနျးခြုပျဖို့အတှကျ ဝျေါလျကာလို Physically Strong ဖွဈပွီး ပွေးအားကောငျး၊ တိုကျစဈကိုလညျး ပံ့ပိုးပေးနိုငျတဲ့သူကို စောစောစီးစီး ထညျ့မသုံးခဲ့တာပါပဲ။
ထုံးစံအတိုငျး ကနျဆယျလိုကို ဦးစားပေးအသုံးပွုခဲ့တာက အပွဈပွောစရာမရှိပမေယျ့ ကနျဆယျလိုဟာ ဒီပှဲမှာခွစှေမျးပြောကျနတောကွောငျ့ ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ဘယျခွမျးကနပေဲ အဓိကတိုကျစဈဆငျပွီး ဂိုးတှသှေငျးယူနိုငျခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။
ယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂျခနျြပီယံဆုကို လကျလြှော့ရမယျ့အနအေထားမြိုးရောကျနပေမေယျ့ နိုငျပှဲဆကျစံခြိနျရနတေဲ့ မနျစီးတီးကို ရပျတနျ့ခငျြတဲ့ဆန်ဒပွငျးပွနတောရယျ၊ ခနျြပီယံဆုကို မနျစီးတီးအသငျး လှယျလှယျကူကူ မရစရေဘူးဆိုတာ သကျသပွေခငျြတဲ့စိတျဓာတျတှကွေောငျ့ အာရုံစူးစိုကျမှုအပွညျ့နဲ့ ကစားသှားခဲ့တာပါပဲ။
ယူနိုကျတကျအသငျးဟာ ပွိုငျဘကျအသငျးရဲ့ စံခြိနျတှကေို ရပျတနျ့နိုငျလရှေိ့တာက အခုမှမဟုတျပါဘူး။ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုနျးက အာဆငျနယျအသငျးရဲ့ လိဂျပွိုငျပှဲ(၄၉)ပှဲဆကျရှုံးပှဲမရှိမှတျတမျးကို ရပျတနျ့နိုငျခဲ့သလို ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီမှာလညျး ပရီးမီးယားလိဂျပှဲ(၄၀)ဆကျတိုကျ ရှုံးပှဲမရှိတဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးကို ဖလကျခြာရဲ့တဈလုံးတညျးသောအနိုငျဂိုးနဲ့ အနိုငျယူပွီး ရပျတနျ့နိုငျခဲ့တယျ။
ဒီရာသီမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ ပွဿနာက ပှဲကွီးတှဆေိုရငျ စှမျးဆောငျရညျကောငျးပမေယျ့ ခံစဈကို ပိတျကစားတဲ့အသငျးငယျတှနေဲ့ဆို ရုနျးကနျရလရှေိ့ပွီး အဲဒီအခကျြကွောငျ့ပဲ သူတို့ရဲ့ တဈကြော့ပွနျပရီးမီးယားလိဂျအိပျမကျက မသခြောဖွဈသှားခဲ့တာပါ။
ဒါပမေဲ့လညျး ဆိုးလျရှားလကျထကျမှာ ယူနိုကျတကျအသငျးစှမျးဆောငျရညျက တဖွညျးဖွညျးနဲ့အပေါငျးလက်ခဏာဆောငျလာတာတော့ အမှနျပဲဖွဈသလို အရငျလို အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးပျေါ ပွနျရောကျဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ ပွောရတော့မှာဖွဈပါတယျ . . .
‘ Manchester Is Red ‘ ဆိုတာကို သက်သေပြခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်
မနေ့က ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲကြီးပွဲကောင်းအဖြစ် ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းက မန်စီးတီးအသင်းကို (၂)ဂိုးပြတ်အနိုင်ယူပြီး “မန်ချက်စတာမြို့ဟာ အနီရောင်တွေ လွှမ်းမိုးထားဆဲ”ဆိုတာ သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီပွဲမတိုင်ခင် မန်စီးတီးအသင်းက ပြိုင်ပွဲစုံ(၂၁)ပွဲဆက်အနိုင်၊ ပရီးမီးယားလိဂ်(၁၅)ပွဲဆက်အနိုင်၊ နောက်ဆုံး(၂၈)ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိတာကြောင့် မန်ချက်စတာဒါဘီပွဲမှာ ရလဒ်ကောင်းတစ်ခုရယူနိုင်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံခဲ့ရပေမယ့် သရေတောင်မရခဲ့ဘဲ အိမ်ကွင်းမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းကို လက်ဆောင်(၃)မှတ်ပေးခဲ့ရတယ်။ ဒီပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး နှစ်ဖက်အသင်းရဲ့ ခြေစွမ်းပိုင်းကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် နှစ်သင်းစလုံး အကောင်းကြီးမဟုတ်ခဲ့ပေမယ့် ယုံကြည်ချက်အပြည့်နဲ့ ကစားနိုင်တဲ့ ယူနိုက်တက်အသင်းက အသာရသွားတယ်လို့ပြောရမယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ အောက်အသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရရင် အမြဲတမ်း မထင်မှတ်တာတွေလုပ်ပြလေ့ရှိပြီး ကိုယ်ကအပေါ်အသင်းဖြစ်နေရင်တော့ မကြာခဏဆိုသလို အမှတ်တွေ ဆုံးရှုံးလေ့ရှိတဲ့ပြဿနာကို အမြန်ဆုံးပြင်ဆင်သင့်နေပါပြီ။
ဒီပွဲမှာတော့ ယူနိုက်တက်နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား ခင်းကျင်းခဲ့တဲ့နည်းဗျူဟာကိုတော့ ချီးကျူးရမှာပါ။ ဆိုးလ်ရှားက တစ်ဦးချင်း Skill ကောင်းတဲ့ မန်စီးတီးတိုက်စစ်ကစားသမားတွေကို One By One Marking လုပ်တာထက် သူတို့အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်လို့မရအောင် ဘောလုံးလမ်းကြောင်းတွေကို ဖြတ်တောက်ကစားဖို့ သူ့ကစားသမားတွေကို ညွှန်ကြားထားပုံပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ယူနိုက်တက်ကွင်းဘက်ခြမ်းမှာ မန်စီးတီးကစားသမားတွေ ဘောလုံးပေးပို့မှုလုပ်တဲ့အကြိမ်အများစုက ဂိုးရှေ့ရောက်တာနည်းပြီး ယူနိုက်တက်ကစားသမားတွေ မကြာခဏဖြတ်ယူသွားနိုင်တာကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။ မန်စီးတီးနဲ့တွေ့တိုင်း စတာလင်ကို အိတ်ကပ်ထဲထည့်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘစ်ဆာကာဟာ အခုပွဲမှာလည်း ထုံးစံအတိုင်း စတာလင်ကို အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီး တွမ်မီနေး၊ ဖရက်ဒ်တို့ရဲ့ ကစားအားကြောင့် မန်စီးတီးတိုက်စစ်ကစားပုံက အရင်လောက်မထက်မြက်ခဲ့ဘူး။ ပြိုင်ဘက်ခံစစ်မှာ လွတ်နေတဲ့ Channel တွေကနေ Attacking လုပ်ပြီး ဂိုးတွေသွင်းနေတဲ့ ဂွမ်ဒိုဂန်လည်း ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ Tight Defensive Play ကြောင့် ခြေချုပ်မိသလိုဖြစ်သွားတော့တယ်။ ဒီကြားထဲ တိုက်စစ်အတွက် အဓိကအသက်သွေးကြောလို့ပြောရမယ့် ဒီဘရိုင်းနားက လူပေးမှားတာတွေဖြစ်ခဲ့သလို၊ ပုံမှန်စွမ်းဆောင်ရည်မရှိတဲ့အခါ မန်စီးတီးတိုက်စစ် Frame တစ်ခုလုံး အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ ယူနိုက်တက်အတွက် ကံကောင်းခဲ့တာတစ်ခုကလည်း ပွဲစလို့ စက္ကန့်ပိုင်းအကြာမှာ ပယ်နယ်တီကနေ ဂိုးရခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲဒီဦးဆောင်ဂိုးကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်း ခံစစ်ကို အသေအချာပြင်ဆင်ခွင့်ရခဲ့သလို မန်စီးတီးအသင်းအတွက်လည်း ချေပဂိုးရမယ်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ဖိအားပါ ဝင်သွားခဲ့တယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ တစ်ပွဲလုံးခြေစွမ်းကို ကြည့်ရင် ခံစစ်မှာ နည်းဗျူဟာမြောက်ကစားနိုင်ခဲ့သလို သူတို့အားသန်တဲ့ Counter Attacking ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချနိုင်ခဲ့လို့ အခုလိုနိုင်ပွဲရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ လူထုတ်ပုံက ပုံမှန်အတိုင်းဆိုပေမယ့် ဝေဖန်ချင်စရာတော့ရှိခဲ့တယ်။ ဥပမာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အားအကောင်းဆုံး ဘယ်ခြမ်းတိုက်စစ်ပိုင်းကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် ဝေါ်လ်ကာလို Physically Strong ဖြစ်ပြီး ပြေးအားကောင်း၊ တိုက်စစ်ကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးနိုင်တဲ့သူကို စောစောစီးစီး ထည့်မသုံးခဲ့တာပါပဲ။ ထုံးစံအတိုင်း ကန်ဆယ်လိုကို ဦးစားပေးအသုံးပြုခဲ့တာက အပြစ်ပြောစရာမရှိပေမယ့် ကန်ဆယ်လိုဟာ ဒီပွဲမှာခြေစွမ်းပျောက်နေတာကြောင့် ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဘယ်ခြမ်းကနေပဲ အဓိကတိုက်စစ်ဆင်ပြီး ဂိုးတွေသွင်းယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ချန်ပီယံဆုကို လက်လျှော့ရမယ့်အနေအထားမျိုးရောက်နေပေမယ့် နိုင်ပွဲဆက်စံချိန်ရနေတဲ့ မန်စီးတီးကို ရပ်တန့်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြနေတာရယ်၊ ချန်ပီယံဆုကို မန်စီးတီးအသင်း လွယ်လွယ်ကူကူ မရစေရဘူးဆိုတာ သက်သေပြချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကြောင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ ကစားသွားခဲ့တာပါပဲ။
ယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ပြိုင်ဘက်အသင်းရဲ့ စံချိန်တွေကို ရပ်တန့်နိုင်လေ့ရှိတာက အခုမှမဟုတ်ပါဘူး။ ၂၀၀၄-၀၅ ရာသီတုန်းက အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ လိဂ်ပြိုင်ပွဲ(၄၉)ပွဲဆက်ရှုံးပွဲမရှိမှတ်တမ်းကို ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့သလို ၂၀၀၅-၀၆ ရာသီမှာလည်း ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲ(၄၀)ဆက်တိုက် ရှုံးပွဲမရှိတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ဖလက်ချာရဲ့တစ်လုံးတည်းသောအနိုင်ဂိုးနဲ့ အနိုင်ယူပြီး ရပ်တန့်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ပြဿနာက ပွဲကြီးတွေဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းပေမယ့် ခံစစ်ကို ပိတ်ကစားတဲ့အသင်းငယ်တွေနဲ့ဆို ရုန်းကန်ရလေ့ရှိပြီး အဲဒီအချက်ကြောင့်ပဲ သူတို့ရဲ့ တစ်ကျော့ပြန်ပရီးမီးယားလိဂ်အိပ်မက်က မသေချာဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဒါပေမဲ့လည်း ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်မှာ ယူနိုက်တက်အသင်းစွမ်းဆောင်ရည်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လာတာတော့ အမှန်ပဲဖြစ်သလို အရင်လို အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် ပြန်ရောက်ဖို့ မဝေးတော့ဘူးလို့ ပြောရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် . . .
အဝေးရောကျနပေမေယျ့ ပွညျသူမြားနဲ့ အတူ ရပျတညျပေး ၊ လကျသုံးခြောငျးထောငျခဲ့တဲ့ ဟိနျးထကျအောငျ
ဒဏျရာကွောငျ့ ရပျရျှဖို့ဒျ ရကျအတျောကွာအနားယူရမှာကို ယူနိုကျတကျ စိုးရိမျနေ